Wednesday July 28, 2021 - 17:21:14 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warbixinnada laga helayo waqooyiga iyo galbeedka Itoobiya ayaa sheegaya in maleeshiyaadka TDF ay lawareegeen magaalo weyn oo ay leeyihiin dadka kasoo jeeda qowmiyadda amxaarada.
dagaal aad uculus oo shalay ka bilaawday magaalada Waldia ayaa sababay in ciidamada Tigreega ay maanta barqadii lawareegaan magaaladan iyo dhammaan deegaannadii hoos imaanayay.
Wariyaal ayaa soo sheegay in ciidamada magaalada qabsaday ay burburiyeen gaadiid dagaal iyo bakhaaro hub ah oo ay lahaayeen ciidamada gaarka ah ee Amxaarada arrinkan ayaa loo fasirtay in Tigreegu aysan magaalada sii haysan doonin.
Tani waa magaaladii 5aad oo Tigreegu ay ka qabsadaan gobolka Amhara, badanaa deegaannada ku dhacay gacanta TPF ayaa kulaala xuduudda ay labadan ismaamul goboleed wadaagaan.
Maleeshiyaadkii ismaamulka Amhara oo niyad jab laga dareemayo ayaa dib ugu gurtay dhanka magaalada Gonder halkaas oo ah meesha ay awoodooda ugu weyn isugu geynayaan si ay udifaacdaan magaaladan taariikhiga ah.
Afhayeen u hadlay qowmiyadda Tigray ayaa warbaahinta u sheegay in ay soo qabsadeen deegaanno dhowr ah oo katirsan gobolka Amhara isagoo ciidamadooda ku sifeeyay kuwa ku taagan dhabihii ay ku xureyn lahaayeen itoobiya sida uu hadalka udhigay.
Mas'uuliyiin amxaara ah ayaa ciidamada Federaaliga Itoobiya ku eedaynaya in ay dayaceen oo ay ku fiirsanayaan dhumucda dagaalka, warbaahinta amxaarada ayaa isla dhaxmaraysa in TPLF ay iibsatay saraakiishii ciidamada ismaamulka arrinkaas oo ufududeeyay in ay qabsadaan deegaanno istiraatiiji ah oo dhammaantood dhaca gobolka Amhara.
magaalada Waldia ee ku dhacday gacanta TPLF waxay leedahay istiraatiijiyad gaar ah waxaana mara khadka tareenada ee isku xiray waqooyiga iyo galbeedka itoobiya, waa magaalo leh kaabayaal dhaqaale oo muhim ah.